ပြည်သူ တွေ မပေါ့ကျ ပါနဲ့ ဆရာဝန်တွေ စိုးရိမ်နေကြ တဲ့ ကိုဗစ် ကူးစက်မှုလှိုင်းတွေ နယ်တွေမှာ စပြီ – Shwe Sar
မနေ့ညက… Contact လေးရာ နဲ့ ဆေးရုံ ကြီး ကုတင်အပြည့် တစ်ရက်တည်း Positive ရာနားကပ်တယ်…. မဲဆွယ်ပွဲ လည်း…လုပ်ထားတော့…. အခြေအနေ တော့ သိပ်မလှဘူး
ကျနော်တို့ စိုးရိမ်တဲ့ နယ် Wave တွေ လာပြီ မန်းလေး မော်လမြိုင် မြင်းခြံ ထီလာ မြင်လိုက်တယ် ဘယ်မြို့တွေ ကျန်သေးလဲ မသိဘူး… မဲဆွယ်စည်းရုံးတွေ နည်းနည်း ပိုဆိုး မှာက… မ န်းလေးလိုမြို့ကြီးကလွဲရင် နယ်က ရန်ကုန်လောက် Facilities မပြည့်ဘူး ဆိုတာရယ် ရန်ကုန် Wave Peak မရောက်သေးလို့ ရန်ကုန်က ပြန်မကူနိုင်တာရယ် အဲ့တာ လေးတွေရှိမယ်
နယ်က လူတွေ တော်တော်ဂရုစိုက်ကြရလိမ့်မယ် (ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း တွေကတော့ သူတို့ အသက်ကို တောင်မငဲ့ ပဲ အစွမ်းကုန်လုပ်မှာ) ကျနော်တို့ ပြောတယ် ပြောခဲ့တယ် အဲ့အေ ရာ င်ေ တွအစုံနဲ့ ကားပေါ် ခုန်ပေါက်နေတဲ့သူတွေဟာ ခများတို့အတွက် သေမင်းကို ပင့်ဖိတ်နေတဲ့သူတွေ ဆိုတာ
ပြီးခဲ့တာတွေ မပြောချင်ဘူးငြင်းရင်လည်း ဒီညကိုတေ့ာ စတယ် လို့ မှတ်ရမယ်..
မနညေ့က… Contact လေးရာ နဲ့ ဆေးရုံ ကွီး ကုတငျအပွညျ့ တဈရကျတညျး Positive ရာနားကပျတယျ…. မဲဆှယျပှဲ လညျး…လုပျထားတော့…. အခွအေနေ တော့ သိပျမလှဘူး
ကနြျောတို့ စိုးရိမျတဲ့ နယျ Wave တှေ လာပွီ မနျးလေး မျောလမွိုငျ မွငျးခွံထီလာ မွငျလိုကျတယျ ဘယျမွို့တှေ ကနျြသေးလဲ မသိဘူး… မဲဆှယျစညျးရုံးတှေ နညျးနညျး ပိုဆိုးမှာက… မ နျးလေးလိုမွို့ကွီးကလှဲရငျနယျကရနျကုနျလောကျ Facilities မပွညျ့ဘူးဆိုတာရယျ ရနျကုနျ Wave Peak မရောကျသေးလို့ ရနျကုနျက ပွနျမကူနိုငျတာရယျ အဲ့တာ လေးတှရှေိမယျ
နယျက လူတှေ တျောတျောဂရုစိုကျကွရလိမျ့မယျ (ကနျြးမာရေး ဝနျထမျး တှကေတော့ သူတို့ အသကျကို တောငျမငဲ့ ပဲ အစှမျးကုနျလုပျမှာ) ကနြျောတို့ ပွောတယျ ပွောခဲ့တယျ အဲ့ အေ ရာ ငျေ တှအစုံနဲ့ ကားပျေါ ခုနျပေါကျနတေဲ့သူတှဟော ခမြားတို့အတှကျ သမေငျးကို ပငျ့ဖိတျနတေဲ့သူတှေ ဆိုတာ
ပွီးခဲ့တာတှေ မပွောခငျြဘူးငွငျးရငျလညျး ဒီညကိုတေ့ာ စတယျ လို့ မှတျရမယျ..
Previous post ရောင်စုံ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ လူငယ်ဆန်ဆန်ပေါ့ပေ့ါပါးပါးလေး လှရက်လွန်းနေ တဲ့ ယုသန္တာတင်
Next post မိမိုက်လွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှပေါ်လွင်လွန်းနေတဲ့ ဆွေဇင်ထက်